Goobaha ugu Fiican ee Moodellada Bilaashka ah iyo Bilaashka ah | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Khayraadka, habyaalada, dhowr
Waxaan ku jirnaa sannadkan 2020-ka waxaanan xoogga saaraynaa wax wanaagsan: waan haysannaa annaga oo gacanta ku hayna boqolaal kheyraad oo loogu talagalay dib-u-cusboonaysiinta qaab-dhismeedka kaas oo aan ku soo bandhigi karno astaanteenna xirfadeed qaababka ugu wanaagsan.
Oo inkasta oo aynaan ku jirin waqtiga ugu fiican ee shaqooyinka qaarkood, kuwa kale oo badan, sida dhijitaalka, annagoo og sida loo baadho waxaan awoodnaa noo hel template resume ah oo aan kaga tagi karno si wanaagsan oo qoran lana soo bandhigay halka aan si fiican ugu dhaqaaqno iyo waa maxay astaanteenna xirfadeed. Aynu ku sameyno taxanahan kheyraadka noocyadiisa kala duwan.
1 Mawduucyada manhajka 24
3 Moodhadhka caymiska Microsoft
4 Freepik dib u cusbooneysiinta arrimo
5 Fasalka CM
6 Template CV
11 Shaqada koowaad
Mawduucyada manhajka 24
Este degelku wuxuu noo ogolaanayaa inaan si bilaash ah u soo dejisanno iyo iyada oo aan loo baahnayn in la maro bogga diiwaangelinta, noocyo wanaagsan oo tayo sare leh oo fikradooda iyo naqshadayntooda ah. Laga soo bilaabo bogga sheybaar kasta waxaan ku soo dejisan karnaa qoraalka ku jira Ereyga ka dibna tafatiri karnaa oo aan u habeyn karnaa sida aan u jecel nahay barnaamijka tafatirka Microsoft.
Haddii aadan barnaamijkan ku haysan Windows, waxaan kugula talinaynaa taas waxaad u isticmaashaa qaar ka mid ah barnaamijyadooda Android iyo iOS oo markaa tafatir faahfaahintaada kiniin ama mobiil. Wax yar oo sabar ah, waxaad ku diyaarin kartaa astaantaada xirfadeed qaabab tayo sare leh, oo si kasta loo heli karo.
Mawduucyada 'CV' - web
Iyadoo Zety haa waxaan wajaheynaa «dhise resume online ah» iyo taas, mahadsanid xaqiiqda ah inay ku jirto Isbaanish, waxaan awoodi doonnaa inaan si tartiib ah u qeexno mid kasta oo ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee qeexaya astaanteenna xirfadeed. Websaydhkan si wanaagsan ayaa loo fuliyaa si markaa iyada oo loo maro dhexdhexaadintiisa aynaan seegin tallaabo muhiim ah.
Waxaan dooran karnaa kahor intaanan bilaabin tafatiraha nooca casharrada manhajka ee aan dooneyno inaan adeegsanno si naqshadeynta loo caddeeyo. Faahfaahin hal abuur leh lama mid aha ta maamul ahaan. Qaybta dhinaca waxaan ku haynaa dhammaan qaybaha ka kooban shaxanka khadka tooska ah si aan ugu dambayn ugu soo dejisan karno. In kasta oo qaybta diiwaangelinta isticmaaleyaashu halkan soo gasho si aan uga tagno emaylkeena iyo xogteenna. Haddii aadan dareensaneyn inaad ku dhex marto ereyga barnaamijka mobilada ama aad qaabeyso shaxanka, tifaftiraha khadka tooska ah sifiican ayuu u shaqeeyaa.
Sumo - Web
Moodhadhka caymiska Microsoft
Ma dooneyno inaan iska indhatirno tayada sheybaarada dib-u-cusboonaysiinta ee Microsoft iyada oo loo marayo Ereyga. Haddii aan dhacno inaan helno adeegga Microsoft 365, waxaan haysannaa Ereygan oo tan macnaheedu waa inaan haysanno noocyo kala duwan oo taxanahan taxane ah oo aan ku soo dejino bilaash; Waa wax macquul ah inaan la kulanno adeeg rukumo sanadle ah oo aan ka badneyn € 100, marka waxaan u adeegsan karnaa keydkiisa daruuriga ah iyo xafiiskeeda otomaatiga si aan u helno xal aan caadi aheyn.
Laga soo bilaabo isla Ereygii ayaan marin ugu helnaa tusaalooyinkaas inaad kala soo baxdo manhajka kana tafatirto barnaamijka qoraalkaaga wax ka bedelka. Beddel dhan oo lacag bixin ah oo ku anfacaya markii aad rabto nooc kale oo heer ah; ama si fudud u weydii saaxiibkiis WhatsApp haddii ay marin u leeyihiin barnaamijkan si ay kuu oggolaadaan inaad isticmaasho.
Xafiiska Mawduucyada - Web
Freepik dib u cusbooneysiinta arrimo
Maaddaama aanan ku soo laabanayn Freepik, sida wixii waxaan sameynay maalin kahor qaabab Powerpoint ah, halkanna waxaan ku heli karnaa a badan oo lacag la'aan ah oo tayo leh arrimo si fudud loogu beddelo qoraalada isla markaana daqiiqado gudahood ku diyaarso astaan ​​xirfadeed oo wanaagsan.
Waan cadeyn karnaa Freepik wali waa maanta mid ka mid ah boggaga khayraadka bilaashka ah, iyo sidoo kale lacagta caymiska, tayada kafiican dhamaan noocyadeeda kala duwan. Ha moogaanin waxa ku jira maxaa yeelay waxay ku siisaa dhammaan noocyada dulqaad yar iyo ogaanshaha sida loo raadiyo. Waxaan horeyba ugu xirnay iskuxiraha sheybaarada cashar bixinta.
Freepik dib u cusbooneysiinta arrimo - web
Un goobta wax lagu barto iyo iskuul loogu talagalay suuqgeynta dhijitaalka ah oo mid ka mid ah maqaaladiisa aan ka helno liistada qaab-dhismeedka dib-u-cusboonaysiinta tayada sare leh ee bilaashka ah. Waxaan ku dhajin karnaa iskuxiraha halkan, laakiin waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad barato meeshan oo, habka, aad ku ogaato qaar ka mid ah noocyada ugu caansan ee casharrada manhajka sharraxaad weyn.
Al dhamaadka maqaalka Aula CM waxaad ka heli doontaa xiriiriyeyaasha Google Drive meesha aad ka soo dejisan karto iyaga oo markaa ku haysta mobilkaaga ama kombiyuutarkaaga shax weyn oo ku saabsan astaantaas xirfadeed ee aad curineyso, ha ahaato raadinta shaqo ugu horreysa ama raadinta firfircoon ee lagu hagaajinayo midka hadda ka dib daraasado la sameeyay. .
Fasalka CM - Web
Fasalka CM tusaalaha tusaalaha tusaalaha ah - Google Drive
Waan soo marnay websaydh dhisme dib-u-dhis ah oo ku qoran Ingiriis, laakiin taasi waxaan bedel uga dhignay inta kale. Waxaan si fudud u dooran karnaa naqshad naqshadeyn ah waxaanan bilaabi karnaa tifaftirka mid kasta oo ka mid ah beeraha iyada oo loo marayo isku xirnaanta websaydhkan internetka.
Laga soo bilaabo khibrad fududIlaa intaad ku hadasho Ingiriisiga, xitaa waad dooran kartaa midabka si aad u habeysid shaxanka oo markaa aad ugu sii dhisto ka dib dhammaan qaybaha aad ku soo bandhigto khibradaada. Websaydh xiiso badan sida loo sameeyo, in kasta oo aanu joojinaynin inuu ku weydiiyo xogtaada bogga diiwaangelinta. Haa, ku weydiin maayo wax euro ah oo soo noqosho ah, markaa waxaan kugula talineynaa qaab dhismeedka khadka tooska ah ee boggaaga xirfadeed.
Template CV - Web
Kuwa kale degel ku qoran af Ingiriis oo noo oggolaanaya inaan dhisno manhajkeenna iyada oo loo marayo tallaabooyin taxane ah oo naloo tilmaamay. Haa, waa inaad isdiiwaangalisaa si aad horey ugu socoto oo aad manhajkayaga uga soo koobto khibradaada.
Wuxuu ku faanaa in manhajku ansax yahay gasho qaybta xirfadaha shirkadaha waaweyn. Haddaynu eegno tayadooda, runtu waxay tahay inaysan haba yaraatee xumaan oo ay yihiin sheybaarro nadiif ah oo naqshadeynta xoogga saaraya minimalism, in kasta oo midabadu aysan ka maqnayn. In ka badan 20 dib-u-cusbooneysiin ah oo aad u fiican oo kuu oggolaanaya inaad ku hesho adduunka xirfad leh hab fudud oo wax ku ool ah.
La dukaanka caanka ah ee dhammaan noocyada kala duwan ee ay abuureen abuurayaasha naftooda u soo geliya astaantaada si aad u iibiso, waxay sidoo kale bixisaa boqollaal sheybaar ah ama dib u cusbooneysiin cusbooneysiin ah. Waxaan u xireynaa xiriirkan xaqiiqda ah in kastoo, inkasta oo sheybaaraduhu aysan xor ahayn, haddana ay yihiin kuwo tayo ku filan oo aan kaga sooci karno inta kale.
Waxaad horeyba u ogayd in shaqo raadinta ay tahay inaad ogaato sida aad uga duwanaan karto inta kale, oo aad u sameysan karto manhaj ka duwan naqshadeynta, nadiifinta qeybaheeda ama curinta adigoon cusleyn, waxay fure u noqon kartaa sidaa darteed waxaa naloo arkaa dadka kale . Mawduucyada aan ku hayno Etsy, iibiyaasha ugu fiican, Waxay ku saabsan yihiin qiyaastii 7 euro, markaa haddii aad rabto inaad kala soocdo naftaada, waxay bedel weyn u noqon kartaa inta kale; gaar ahaan haddii aad rabto inaad waqti badan ku bixiso buuxinta manhajka halkii aad ka sameyn lahayd naqshadeynta iyo in ka badan.
Etsy resume arrimo - Web
Waxaan ku jirnaa a goobta ay iska leedahay Envato, suuqa mawduucyada, sheybaarada iyo sheybaarada wax walba Nooca CMS aad caan u ah waxayna leedahay iskuxiraha soo dejinta 20 shey oo resume ah oo aanan rabin inaan iskaga tagno. Waxaad kuheli kartaa iyaga oo bilaash ah waxayna kuu sharaxayaan midkasta si aad ula soo bixi karto adigoon wax ballan qaad ah samayn.
Mid kasta mid ka mid ah 20ka sheybaar ayaa tayo sare leh, sidaa darteed waa inaan doorannaa nooca qaab, midab iyo qaab ee aan dooneyno inaan siino joogitaan dheeri ah astaanteenna xirfadeed. Meel caan ah oo caan ah oo aad ku heli karto arrimo si aad uga soocdo inta kale.
Tusaalooyinka Tutsplus - Web
La Barxadda shaqo raadinta ee Infojobs ayaa noo oggolaaneysa inaan marinno 15 shey ee taariikh nololeedka si loogu helo suuqa shaqada sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan. Xaqiiqda ah in boggan loogu talagalay shaqaalaynta Isbaanishka ayaa horeyba u qeexaysa tayada sheybaaraheeda iyo sida ay si buuxda ugu adeegi doonaan himiladeenna.
ka Waxaa jira noocyo kala duwan waxaana loogu talagalay suuqa Isbaanishka shaqaalaynta, sidaa darteed waxaannu ku dhowdahay inaan iyaga ka dhigno kuwa ugu fiican taxanahan degellada ah oo aad kala soo bixi karto qaab-dhismeedka dib-u-cusboonaysiinta tayada leh. Hadda waa waqtigii shaqo laga heli lahaa boggaaga.
Infojobs ayaa dib u bilaabaya arrimo - Web
Este Websaydhka ugu horreeya ee Isbaanishku wuxuu na siinayaa marin taxane kale ah ama arrimo aan la dayacin oo aan kugula talineyno sidii tii hore ee ka timid Infojobs. Fudud, laakiin wax ku ool ah, waxay ku wajahan yihiin suuqa shaqada ee waddankeenna, sidaa darteed ha moogaan midkoodna si aad ugu habbeyso soo dejinta faylka 'Word' sidaad u jeceshahay oo aad u caddeyso inaad rabto inaad shaqo raadiso.
Shaqada koowaad - Web
Waxaan hadda dhammeynay liiskan degellada ah ee dib-u-habeynta dib-u-habeynta iyada oo la socota Canva, oo ah khabiiro kale oo tan ku jira oo bixiya waxyaabo tayo sare leh oo khadka tooska ah laga helo isla markaana sidoo kale leh qaab dhisme; taas oo ah tan aan wali u isticmaali karno noocyada kale ee hawlaha sida adiga oo kale waxaan ku baranay maqaalo kale halkan ku yaal Creativos Online.
Canva resume templates - Web
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Dib u cusbooneysii tusaalooyinka si aad u soo dejiso oo aad naftaada u soo bandhigto sidii hore oo kale heer xirfadeed